बुहारी विनालाई प्रदेश अध्यक्ष बनाउदै प्रचण्ड ! – Thulo Khabar - Thulo khabar
बुहारी विनालाई प्रदेश अध्यक्ष बनाउदै प्रचण्ड ! – Thulo Khabar
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बुहारी विना मगरलाई पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष बनाउने तयारी थालेको खबर छ । बुहारी विनालाई पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष बनाउन प्रचण्डले सुदूरपश्चिमका माओवादी नेताहरुसंग छलफल थालेको एक नेताले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन २०७७ को फैसललाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएपछि सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ ।
लेखराज भट्ट नेकपा एमालेमा गएपछि विनालाई अध्यक्ष बनाउन प्रचण्डलाई सजिलो भएको हो । उसो त प्रदेश अध्यक्षमा बैतडीका नरेन्द्र कुँवर (विजय सुन्दर) को पनि दावी रहेको छ । उनी पनि प्रदेश अध्यक्षको दावी गर्दै प्रचण्ड निवास खुमलटार धाइरहेको खबर छ । हालको अवस्थामा उनी सिनियर र सक्रिय नेता हुन । तर प्रचण्डले विनालाई नै अध्यक्ष बनाउने सोच बनाएको खुमलटार श्रोतको भनाई छ ।
(२०७८ साउन ४ गते, साँघु साप्ताहिक)